Sat, Aug 24, 2019 | 10:30:42 NST
20:21 PM (5years ago )
भदौ २१ भित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संवाद त गरिरहेको छ ।
तर मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको भनाईमा दलहरुको छलफल सहमतितर्फ नै उन्मुख छ ।
नेकपा–माओवादीले माग गरे अनुसार सर्वपक्षीय सभामा जानुपर्ने भयो भने दुई चार दिन लम्बिन सकेपनि माघ ८ गते संविधान निर्माण गर्ने कार्यतालिकामा असर नपर्ने भट्टराईको दावी छ । समिति सभापति डा. भट्टराईसँग उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले कुराकानी गर्नुभएको छ :
अहिलेसम्मको छलफल संवादमा मात्र केन्द्रित छ कि साँच्चै सहमतितर्फ पनि उन्मुख छ ?
संवाद सहमतितर्फ नै उन्मुख छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि देशव्यापी रुपमा जुन खालको निराशा, आशंका थियो, अहिले हामीले योजनाबद्ध रुपमा प्रयास गर्दै गएपछि अहिले दलहरुबीचमा एउटा विश्वासको वातावरण बनेको छ । यस्तै सरोकारवाला पक्षसँग हामीले जसरी छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं यसले सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।
पहिलो संविधानसभा जुन कारणले विघटन भएको थियो, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली जस्ता मुद्दा त जस्ताको तस्तै छन् । यसबाट तपाईंले भदौ २१ भित्र सहमति जुटाउनुहुन्छ भन्ने आधार के ?
सहमति निर्माण भनेको जहिले पनि अन्तिम बेला नै हो । सुरु सुरुमा त सबै पक्षले आफ्नो अडान नै राख्ने र त्यही नै लागू गर्ने बल गर्छन् । तर अन्तिममा सहमति भनेको एउटा सम्झौता हो । आआफ्नो अडानबाट अलिकति पछाडि नहटेसम्म सहमति बन्न सक्दैन । अहिले सहमतिको लागि छलफलले तिव्रता पाएको छ । केही दिनभित्र महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रु गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । विस्तारै हिउँ पग्लिन थालेको छ । र आइसब्रेक छिटै हुन्छ ।
नेकपा माओवादीले सर्वपक्षीय सभाको माग गरेको छ । अब यो सभामार्फत छलफल हुने हो कि तपाईंको समितमार्फत ?
हामीले यसलाई समानान्तर ढंगले नै हुन्छ । पहिले तीन दलका शीर्ष नेताहरुको वैठकले एउटा सहमति निर्माण गर्छौं । त्यसपछि नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुसँग छलफल गर्छौं । उहाँहरुले सर्वपक्षीय सभाको माग गर्नुभएको छ । त्यस विषयमा पनि हामी सकारात्मक छौं । संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुबीचको सहमति र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग पनि सहमति निर्माण गरेर अन्ततः संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने । त्यो विधि अपनाउन सकिन्छ । यस विषयमा चाहिँ सकारात्मक छलफल सुरु भएको छ ।
तपाईंले भनेजसरी भदौ २१ भित्र सहमति भएन भने के हुन्छ ?
एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने भदौ २१ सम्म सहमति हुने सम्भावना रहन्छ । सहमति भनेको अन्तिम बेलामा नै गएर हुने हो । तर एउटा जटिलता के आएको छ भने नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो सर्वपक्षीय सभामा जाँदा थोरै समय चाहिँ लिन सक्छ । त्यसो भयो भने सहमतिले नै एउटा वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
भदौ २१ गते सहमति भएन भने प्रकृया जाने कि नजाने ?
मुख्य कुरा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति विना संविधान बन्दैन । अनि कुनै पनि पक्षलाई बाहिर राखेर संविधान बनाइयो भने त्यो दीगो पनि हुँदैन । त्यसैले सहमति र सम्झौताको विकल्प छैन । प्रकृया त औपचारिक रुपमा भन्ने कुरा मात्र हो ।
भदौ २१ पछि पनि हुन सक्छ त्यो सहमति ?
राजनीति सभा गर्नु पर्यो भने त एकपक्षले मात्र टुंग्याएर त भएन ।
त्यसो भए कार्यतालिका सर्ने संकेत देखियो ?
संकेत त अब नकारात्मक कुरा मात्र किन गर्ने । २१ गतेभित्रै गर्न सक्छौं भन्ने मलाई पुरै विश्वास छ । दलहरुको छलफलबाट सकारात्मक संकेत पाइरहेको छु । तर सर्वपक्षीय सभामा जानुपर्ने भयो भने दुईचार दिन पर जान्छ । भदौ २१ गते भनेको पहिलेको जेठ १४ जस्तो होइन । भदौ २१ भनेको मुख्य असहमतिका मुद्दामा सहमति कायम गर्ने कुरा मात्र हो । रातिसम्म बसेर पनि त्यसलाई सहमति कायम गर्न सकिन्छ ।
एउटा कुरा नढाँटी भन्दिनुहोस् न तपाईंको मनले माघ ८ गते संविधान बन्छ भनेर भन्छ ?
बन्छ, बन्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन । छिटोभन्दा छिटो संविधान बनाउनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा समय घर्काउने काम गर्नु हुँदैन । र माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ । र त्यो संभव छ ।